Yuusuf Dabageed oo Muqdisho kula kulmay wasiirrada iyo xildhibaanada ka soo jeeda HirShabeelle “SAWIRRO” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Yuusuf Dabageed oo Muqdisho kula kulmay wasiirrada iyo xildhibaanada ka soo jeeda...
Yuusuf Dabageed oo Muqdisho kula kulmay wasiirrada iyo xildhibaanada ka soo jeeda HirShabeelle “SAWIRRO”
Madaxweyne Ku Xigeenka Dowladda Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa kulan qada Sharaf ah maanta u sameeyay wasiirrada iyo xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle.
Kulankaan ayaa ahaa is xogwareysi la xiriira xaaladda Hirshabelele, ka shaqeynta midnimada iyo horumarinta Hirshabeelle, waxaana goobjoog ahaa Madaxweynihii hore ee Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble.
Madaxweyne ku xigeenka Dowladda Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay ka shaqeynta Midnimada Hirshabeelle, mar uu soo hadal qaaday arrimaha Doorashooyinka ayuu sheegay Hirshabelle ay ka dhici doonto doorasho daah furan oo xor iyo xalaal ah.
Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka ayaa ka sheekeeyay dadaallo dib u heshiisiin ah uu waayihi dambe uu ka waday magaalooyinka Beledweyne iyo muqdisho, isagoo tilmaamay in hadda ay meel wanaagsan u marayaan dadaaladaasi.
Previous articleWasaarada caafimaadka oo guddontay daawo dhalinyaro Soomaaliyeed ay ugu deeqeen Martiini “SAWIRRO”
Next articleSarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya qeybta Galmudug oo ka digay ciidanku siyaasadda ku milmo